मेलिना राईको नयाँ गित राम राम तिम्रो कसम सार्बजनिक ! – दैनिक नेपाल न्युज
मेलिना राईको नयाँ गित राम राम तिम्रो कसम सार्बजनिक !
प्रकाशित द्वारा: मङ्लबार, भदौ १७, २०७६
काठमाडौं । दिपक ओलिको शब्द संगित रहेको अनि गायिका मेलिना राई र गायक प्रेम राइको स्वर रहेको राम राम तिम्रो कसम ढाटे मरिजाउ बोलको गितसंगै भिडियो सार्बजनिक भएको छ । इटहरीको गोकुलम रिसोर्टमा सुटिङ भएको गितमा समीर सुवेदी र सृस्टि रिजालको अभिनय देख्न सकिने छ । समीर सुवेदी र सृष्टि रिजालको पहिलो पल्ट गितमा अभिनय रहेको छ । हरेन्द्र खत्रीको निर्देशनमा तयार भएको म्युजिक भिडियो पुर्बमै सुटिङ भएको हो ।
समीर सुवेदी सञ्चारकर्मी तथा समाजसेवी हुन उनि बिगत आठबर्ष देखि विभिन्न हास्य टेलिशृन्खलामा देखा पर्ने गर्थे र अहिले हास्य टेलिशृन्खला दोबाटेमा निरन्तर चिबे बुढोको भुमिकामा देखिन्छन । उनले सडकमा गाउने बाल गायक बिक्रम लावती लिम्बुलाइ सडकबाट उठाएर धेरैमाझ पुर्याएर अहिले पढाइरहेका छन । बिक्रमलाई काठमाडौ पुर्याउने क्रममा विभिन्न मिडियामा देखा परेपछी उनलाई गितमा अभिनय गर्ने अवसर आएको थियो र त्यो अवसरलाई स्वीकार गरेर समिरले पहिलो पटक अभिनय गरे ।समीर सानो ठाउँबाट संघर्ष गर्दै गरेका कलाकार हुन ।
उनी सानैबाट कलाकार बन्छु नै भनेर प्रण गरेर आएका हुन । मेलिना राईको स्वर रहेको सुन्दर गितमा नब प्रतिभा प्रेम राईले मेलिनालाई साथ दिएका छन । भिडियोमा धेरैजना कोरस कलाकारहरुको अभिनय पनि देख्न सकिन्छ । भिडियोमा बिर्तामोडका काले दाइले नचाएका सोम मगरातीले श्रिङ्गार गरेका र शिरकुमार साम्पाङ राइले क्यामेरामा कैद गरेका थिए । तल हेर्नुहोस त भिडियो…
टेक्सासमा बन्दूक आक्रमण गर्ने ३६ बर्षीय यूवक रहेको प्रहरीद्वारा पुष्टि
जापान जानेलाई अत्यान्तै खुशीको खबर